China FOTON U12D mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Umqeqeshi webala leFoton 12m lelona binzana liphezulu lomgangatho, ukhuseleko, ukuthembeka, ukusebenza ngokukuko, ukulungiselela ukutya kwiimfuno zentengiso ngobuntu bayo obomeleleyo kunye nefuthe elibonakalayo.
Inqanaba elipheleleyo 12000 * 2550 * 3790
Ukunciphisa Ubunzima 13T
Indawo yokuhlala I-32 + 1 + 1/49 + 1 + 1
Olona Donga luphambili lubonakala ngathi ludonga lwangaphambili: uyilo oluhle kwaye luyathandeka, lubonakalisa isimilo salo; Ifestile yomoya ephezulu: ene-degree ye-caster engama-50 yokumelana nomoya ophantsi, ebalulekileyo ekugcineni amandla; Udonga olusecaleni: uyilo oluhlengahlengisiweyo olunezinto ezinamandla nezifutshane.
Iibhasi ze-Foton zihamba ngovavanyo olungqongqo lwezithuthi kunye novavanyo lokudlula ngaphezulu kwe-100 lamawaka eekhilomitha kwimeko yeendlela ezahlukeneyo kwaye phantsi kweemeko zemozulu eziqatha ezinje ngobushushu obuphezulu, ubushushu obuphantsi okanye uxinzelelo oluphantsi.
Ngobume obomeleleyo, iibhasi zeFoton zijamelana nokujongana ngapha nangapha kunye nokungqubana kwentloko kunye nokuthintela ukuphoswa ngasemva. Ngaphambi kokungena kwinkonzo, bafumana uvavanyo olunzima kunye nokuqinisekiswa.